Kune nzira dzakawanda dzekushongedza, matekinoroji matsva anogona kuvhiringa vanhu vazhinji kana vatarisana nesarudzo yavo. Sarudzo yemhando yekumaka inoenderana nezvinhu zvinoverengeka. Kusarudza chinangwa chekupfeka kana machira ekudhinda kunogona kutibatsira kusarudza imwe nzira. Zvisinei nekuti ndeipi nzira yekumaka yaunosarudza, kusona shinda inoramba iri nzira yakanaka kwazvo.
Iyo yekare nzira yekushongedza
Embroidery Inozivikanwa kwezviuru zvemakore nekutenda kune yayo yepasi fomu, inoramba ichishanda nguva dzese. Nekuda kweizvozvo, machira akavezwa anotaridzika chaizvo uye anovimbisa hupenyu hwakareba kupfuura machira akashongedzwa nemamwe maitiro.
Kapu ine magirafu akagadzirwa nekomboni yekushongedza
Zvishongedzo zvezviitiko zvese
Yedu signature inobata nekugadzira yakasimba uye inoshanda kushongedza kubasa uye kushambadzira zvipfeko, pamwe nehotera uye machira ekudyira. Isu tine yedu yega muchina paki, iyo inoita kuti tikwanise kuverengera yemakwikwi mitengo uye ipfupi nguva yekuendesa.
Isu tinoita zvese kuyedza kupedzisa yega yega odha. Chikwata chedu chichafara kukubatsira iwe kusarudza zvigadzirwa pamwe nenzira yekushongedza. Isu tinopawo basa rekutakura zvipfeko.
Kuurayiwa kombasi yemakomputa inoda kutengwa kwechirongwa chekushongedza. Iyi nzira inokurudzirwa kune madiki magiraidhi. Kana chirongwa chekushongedza chikangotengwa, chinosara mudura redu rezvakanaka, saka paunodzoka kwatiri uine imwe odha, hauzobhadhariswa gadziriro yechirongwa chimwe chete kechipiri. Iyo yakasarudzika kwazvo uye isingagumi fomu yekushongedza.
Iko kurova chaiko kune avo vanoisa kusimba munzvimbo yekutanga. Featured aiva kunyangwe makore gare gare zvinoratidzika kunge zvinoshamisa. Izvi zvinogutsa avo vane hanya nemufananidzo wekambani yavo. Mhando iyi yekudhindisa inokurudzirwawo kune mbatya dzinowachwa kazhinji dzinoratidzwa kune yakasimba yekuwachisa zvinhu.
Maitiro ekushandisa embroidery yekombuta
Screen kudhinda inzira yekushongedza iyo fomu yekudhinda iri template yakashandiswa pane gobvu mesh. Iyo mesh inogona kugadzirwa nesimbi kana synthetic fiber. Kugadzira kopi inosanganisira kutenderera pendi kuburikidza nefa. Kugadzira kudhinda kwechidzitiro kunosanganisira kutenga matrix ekudhinda.
Iyi ndiyo mhinduro yakanakisa kana iwe uchida kuwana mhedzisiro yemavara ane muto apo uchichengetedza kunyatsoita uye kushora abrasion. Iyo chirongwa chakapedzwa chinotaridzika chakasimba kwemavhiki mazhinji kana kunyange mwedzi.
Chirongwa chega chega chinoitwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Nguva imwe neimwe patinogadzirisa chigadzirwa maererano nezvinhu uye girama pamwe nenzvimbo yemifananidzo muchibvumirano nemutengi. Dzimwe nguva, isu tinoshandura dhizaini nemvumo yemutengi kuti tiwane mhedzisiro.
Screen yekudhinda inogona kuitwa kwete pazvipfeko chete, asi zvakare pane akasarudzwa magadget
Kudhinda kwakananga naDTG
Kudhinda kweDTG kana "Direct To Garment" iri nzira yemazuva ano yekushongedza kwakananga kwemachira uye mbatya. Iyo DTG maitiro anotendera iwe kuti ushandise chero magiraidhi kune donje machira kana donje ine musanganiswa weelastane / viscose. Graphics zvinogadzirwa uchishandisa yakakosha purinda. Kudhinda neiyo DTG maitiro inogonesa iyo yakakwana kubereka kwemavara pamwe chete neruvara shanduko. Kudhinda kunogoneka pasina chikonzero chekugadzirira dhizaini kubva pachidimbu chimwe chete.
Kugara kweDTG kudhinda kunoenderana nezvinhu zvinoverengeka. Chekutanga pane zvese, iyo modhi uye ma parameter emidziyo - nyowani midziyo, zvirinani kunaka uye kuita. Chimwe chinhu chinokonzeresa kugadzikana mhando dzependi dzinoshandiswa, jira rinogadzirwa iro uye hunyanzvi hwemushandi.
Kudhinda kweDTG, nekutenda kune kwayo nyowani, inogona kushandiswa zvese mukugadzira kwakawanda uye kwekugadzira kubva pachidimbu chimwe. Izvi zvinogonesa kupurinda bvunzo usati watanga iwo ese akateedzana. Ichowo chisarudzo chakanakira zuva rekuzvarwa rakasarudzika, yemuchato kana yeuchipo zvipo. Kumakambani, iri zvakare mhinduro iri nyore kana tichida kuti mushandi wega wega ave nezita ravo kana zita rebasa pazvipfeko zvavo. Izvi zvinoshandawo kune zvipfeko, i.e. zvekupfeka kirabhu yemitambo, uko nhamba dzakasiyana dzinodhindwa pahembe kana zvikabudura.
Printer nyowani Hama DTXpro Bulk, iyo yatakatambanudza nayo yedu paki yemuchina, iri inochinjika uye yakanyanyisa kuita mhando. Kutenda kwazviri, iwe unogona kuwedzera imba yako yekuchengetera nezvakagadzirwa zvigadzirwa senge T-shitsi kune wese munhu ane zita rake, zita rebasa, kushambadzira mabhegiuye kunyangwe shangu dzakashongedzwa nemifananidzo yako chiyero chemass futi mashoma akateedzana.
Isu tinowanzoshamisika nezvazvo chipo chakasiyana kune vadikanwa panguva yeKisimusi, Isita, Zuva raamai kana zuva rekuzvarwa. Tinoda kuti chipo chedu chimire uye chigare kwenguva refu
mupfungwa, kuti izvi zviitike, zvakakosha kufunga nezvechipo chakasarudzika, kazhinji izvo zvinoshanda hazvingomutse chete ndangariro dzinofadza, asi zvakare zvinoshanda kwenguva yakareba.
Kudhinda kweDTG haidi gadziriro yeprojekti inova imwe yemabhenefiti ayo makuru (sezvazvinoitika nekudhinda kwescreen kana machira emakomputa). Izvo zvinokwanisika kupurinda magirafu kana zvinyorwa kubva pachidimbu chimwe chete, zvakare kudhinda pikicha ndeyechokwadi uye kunyanya inozivikanwa nezvipo, asi zvakakosha kuti pikicha iri mune yepamusoro resolution Kudhinda kweDTG kunosarudzwa nechido nemasangano ekushambadzira nekuti anoonekwa nemutengo wakaderera nekusimba, izvo zvinonyanya kukosha pakuronga mbatya kana machira ezviitiko zvakasiyana kana mibairo yemakwikwi.
tinokukoka iwe Earlchiito nebasa redu shopundiani angave anofara kupindura mibvunzo yako uye nekuita yemahara yekumaka quote
sweatshirt ine Allegro logosweatshirts ane zitakombiyuta yemakomputaLogo T-shirtsmahembe akanyorwazvipfeko zvine logozvipfeko zvine chinyorwanemvere nemuchekakudhinda screenkupfekedza mbatyakushongedza zvipfeko zverourokumaka zvipfekokumaka mbatya